Puntland Voice – Page 3 – Codka Dalka iyo Dadka
Dawladda Qadar oo Maal Galinaysa Dekadaha Soomaaliya
Qadar iyo Dekedaha Soomaaliya Waa wafdi sare oo kasocda dalka Qadar, maanta ayay tageen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyagoo ujeedkoodu yahay inay qiimeeyeen Dekedaha Soomaaliya si loogu sameeyo dayactir iyo dib u dhis. Wasiirka dekadaha iyo gaadiidka Badda Xukuummadda […]
Ra’iisul wasaraaha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre, ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay Taliska guud ee Ciidanka Booliska,
halkaasi oo uu kusoo dhoweeyey Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko iyo Saraakiil ka tirsan Ciidankaasi. R/wasaare Kheyre oo ay wehliyeen Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane C/raxmaan Cumar Yariisoow, ayaa kulan looga hadlayey dardar gelinta Ammaanka la qaatay […]
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caawa waxa uu Xarunta Madaxtooyada ugu sameeyay casho sharaf Guddigii Qabanqaabada Munaasabadihii 26ka Juunyo iyo 1-da Luuliyo.
Madaxweyne Farmaajo oo hadal kooban oo mahadnaq ah goobta ka jeediyay ayaa ugu horreyn uga mahadceliyay Guddiga Qabanqaabada, oo uu hormuud u ahaa Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Danjire Daahir Maxamuud Geelle, sidii habsamida lahayd ee ay […]
Madaxweyne Axmed Madoobe Midnimada Soomaaliya waa mid looga fadhiyo Soomaali
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland wuxuu sheegay in xornimada wadanka ay dadaal iyo wakhti badan galiyeen jiilkii wakhtigaas kuwaas oo mirihii ay beereen aan maanta haysano inkasto waxyaabo badan aysan ahayn sidii la rabay. Xornimadii Gobolada Waqooyi 26 June ayuu Madaxweynahu […]
Waxaan cidna ka qarsoonayn in wada-lahaanshihii Somaliland ee soo jireenka ahaa lagu badalay beelo isu bahaystay boobka Somaliland
kuwaasoo heshiis beelaysan oo aysan cidna ka qarin ku galay in dowladnimada iyo khayraadka dalka si gaar ah u wada-yeeshaan ugana faa’iidaystaan,” sidaas waxaa lagu yiri gunaanadkii shirkii Beelaha Garxajis ee Somaliland. Waxay sidoo kale xuseen in 65% Madaxweyne Biixi […]
Madaxweyne Gaas oo Hambalyo ku aadan 26 June u diray Shacabka Soomaaliyeed
Waxaan maanta oo ah 26 june 2018 aan rabaa in aan halkaan hambalyo uga diro dad weynaha Soomaaliyeed meelkasta ay joogaan, gaar ahaan shacab weynaha gobolada Waqooyiga Soomaaliya oo ah maalintii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed laga taago gayiga Soomaaliyeed […]
halkaaso labada dal ay wadahadallo uga furmayaan. Wafdiggaan ayaa waxaa hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Cismaan Saalix iyo la taliyaha madaxweynaha Ertrea Yemane Gebreab. Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa 5-ta bishan June shaaca ka qaaday inuu u hoggaansamayo islamarkaasna dhaqan […]
Maamulka Gobolka Bari iyo Odayaasha Dhaqanka oo Kulan ka Yeeshay Muhaajirtiinta Oromadda
Guddoomiyaha Gobolka Bari Yuusuf Max’ed Wacays (Dhedo), Agaasimaha Qaxootiyada Puntland Burhaan Huruuse Xaashi, hey’adaha ka shaqeeya arrimaha muhaajiriinta iyo qaar ka mid ah nabadoonada gobolka bari ayaa maanta shir ku yeeshay Xafiiska gudoomiyaha Gobolka ee Bosaso. Shirkaan ayaa lagu lafaguray […]
Macalimiin Masaari ah oo Xaflad Sagootin ah loogu Sameeyey Degmadda Qardho
aakiisha Amaanka, Musharax Madaxweyne Puntland Khaliif Ciise Mudan Wasiirka Xanaanada Xoolaha Puntland ayaa ka qayb galay Sagootin loo sameeyay 17 macalin oo Masaari ah kuwaas oo uu dhamaaday waqtigoodii shaqada ee puntland. Macalimiinta la sagootiyay ayaa waxa bedelaya macalimiin kale, […]
Mudaharaad ballaaran oo shacabka Garowe ay Kaga soo horjeedaan dhibaatada iyo duulaanka maamulka Somaliand uu ku soo qaaday gobolka Sool ayaa maanta ka dhacay Garowe.
Dadka isu soo baxay waxay muujiyeen siday uga xunyihiin dhibaatada maamulkaaasi uu ku hayo shacabka Laascaanood oo dil, xabsi iyo caburin isugu jirta. Waddooyinka Garowe ayay socod dheer ku Mareen dadweynihii isu Soo baxay iyagoo isugu tagay barxada Garowe, halkaasi […]
« Previous 1 2 3 4 5 … 1,044 Next »